रामबहादुर थापा बादल अर्थात् क्रान्तिको नाममा धोका दिएर हिँडेका पात्र | Safal Khabar
#संसदीय दल‍को बैठक
रामबहादुर थापा बादल अर्थात् क्रान्तिको नाममा धोका दिएर हिँडेका पात्र
सोमबार, १० फागुन २०७७, ११ : ५९
काठमाडौँ । ओलीहरुले ठूलो भाग दिन्छन् र खाउँला भन्दै सहयोद्धा छाडेर हिँडेका रामबहादुर थापा बादल विगतमा क्रान्तिको नाममा धोका दिएर हिँडेका पात्र र प्रवृत्ति हुन् । जनयुद्धकालमा लिनप्यायोवादी प्रवृत्ति राखेका कारण कारवाहीमा परेका उनले कहिल्यै इमान्दार प्रयास गरेनन् ।
जनयुद्धकालमा पनि सधै आत्मसुरक्षावादी चिन्तनले ग्रस्त भएका उनी कहिल्यै प्रत्यक्ष मोर्चामा सहभागी भएनन् । सधै मूल नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गर्ने उनको स्वभाव क्रान्तिकारी छँदै थिएन भन्दा पनि हुन्छ । प्रचण्डसँग बाल्यकालको सहयात्रीको नाम दिएर सौदाबाजी गरेका बादलकै कारण तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकार कटुवाल प्रकरणमा अपदस्त भएको थियो ।
चर्को क्रान्तिकारी बन्दा झण्डै बहुमतको सरकार छाडेर माओवादी प्रतिपक्षमा रहनु परेको थियो । बादलकै कारण तत्कालीन सरकारले रुक्माङगद कटुवाललाई कारवाही गर्नुपरेको तथ्य जगजाहेर नै छ । कटुवाल प्रकरण मात्रै नभएको भए नेपालले संविधान निर्माणका लागि झण्डै एक दशक लगाउनुपर्ने थिएन । देशको मोटो धनराशी खर्च गरेर दुईदुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने पनि थिएन ।
पछिल्लो पटक उनै बादलले प्रचण्डलाई अनेकन आरोप लगाएर क्रान्तिको नाममा पार्टी तहसनसह बनाएर हिँडे । पछिल्लो पटक जब पद प्राप्त गर्ने अवस्था आउन थाल्यो, उनी दौडिएर आए । अनि भने, लौ कमरेड अब मिलेर जानुपर्ने भयो । अवसरवादी चरित्र देखाउन सिपालु मानिएका उनले कुनै मेहनत नै नगरी राष्ट्रियसभा सदस्य पड्काए ।
पार्टीभित्र मन्त्री बन्न काविल र गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने क्षमता भएका धेरै नेता थिए । तर, राष्ट्रियसभाको सदस्यको शपथ खाएको एकाध मिनेट पनि नबित्दै उनलाई मन्त्री हुने ग्रन्थीले काम ग¥यो । मन्त्री पदको स्वाद पाएका उनले जसरी पनि आफू मन्त्री हुने भन्दै प्रचण्डसँग पुनः अवसरवादी चरित्र देखाए । प्रचण्डले पनि लौ गरिखाऊ भन्दै सहमति जनाए ।
पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्ष हुँदा होस् वा अप्ठ्यारो परेको बेलामा कहिल्यै सहयोग नगर्ने, स्पष्ट मत नराख्ने, तर सधैँ पद भने चाहिने उनको स्वभाव सडकमा छरपष्ट भएकै हो । ‘राजनीतिक रुपमा कुनै पनि मूल्य नभएका, पिँध नभएको लोटाजस्तो चरित्रका मान्छे हुन् बादल’ उनलाई नजिबाट नियालेका पूर्वमाओवादीका एक नेताले भन्छन्, ‘अप्ठ्यारो बेलामा कहिल्यै साथ र सहयोग नगर्ने, सधै पद मात्रै चाहिने, शक्ति र पहुँचबिना बस्न नसक्ने तथा दिएको जिम्मेवारी समेत निभाउन नसक्ने प्रवृत्ति बादलमा देखिन्छ ।’
पछिल्लो पटक ओलीले संसद विघटन गरेपछि गृहमन्त्री पद छाड्नुपर्ला भन्ने भय उनमा देखियो । गृहमन्त्रालयको खासखास कामहरु नाममा उपप्रधानमन्त्री भएपनि व्यवहारमा राज्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेका ईश्वर पोखरेलले सम्हाले पनि उनलाई खासै मतलब छैन । आफ्नो मन्त्रालयको काम बाहिरैबाट हुँदा पनि उनलाई नैतिकता भन्ने कुराले छुँदैन ।
प्रहरी कर्मचारीको बढुवाको फाइल बाहिरबाट बन्छ, ओलीले सबै निर्णय गर्छन्, उनलाई थाहा छैन र हुँदैन । तर, पनि उनलाई पद चाहिन्छ । नेपाली संस्करणका लिनप्याओवाद भनेकै यही हो, बादलको संगतमा रहेका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘काम गर्नु नपर्ने, पद मात्रै ओगटेर बस्ने स्वभावका नेता हुन् बादल । जसलाई केवल पद भए हुन्छ । पद नदिनेलाई उनी चिडियाखानामा लगेर थुन्छु समेत भन्न मन पराउँछन् ।’
पछिल्लो पटक राजधानी काठमाडौंमा ओली गुटले आयोजना गरेको पञ्चसभामा रामबहादुरले आन्दोलनकारी विरुद्ध असाध्यै निच व्यवहार देखाए । उनले आन्दोलन गर्नेलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्ने धम्की दिए । जसको हातमा प्रहरी प्रशासन छैन, जसको हातमा अनुसन्धान विभाग छैन, उसैले आन्दोलनकारीलाई थुन्ने धम्की दिए । जसको आफ्नो केही छैन, उसले ठूला कुरा नगरेकै बेश हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।
प्रहरी, अनुसन्धान विभाग सबै ओलीको हातामा अथवा खास गृहमन्त्री भनिने गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले भने अनुसार चल्छ । रामबहादुर नाम मात्रका मन्त्री हुन् । केवल उनलाई मन्त्री भनाउनु न परेको छ । त्यो पनि कति समयलाई हो ? कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
गन्न छाडे ओलीले
ओलीलाई बोकेर हिँड्न तयार भएका बादललाई ओलीले गन्न छाडेका छन् । युवा संघको गुट छनौटमा समेत उनको कुनै हैसियत देखिएन । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा पनि उनले भाग पाएनन् । राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा बढुवा सबै ओली र उनको गिरोहले गर्छ । बादल हेरेको हे¥यै हुन्छन् ।
महत्वपूर्ण काम गर्ने बेला आउँछ, निर्णय सबै बालुवाटारले गर्छ । उनी मन्त्रालयमा हुन्छन्, निर्णय भएको कुरा पत्रिकामा आएपछि उनले थाहा पाउँछन् । यस्तै यस्तै हुन थालेपछि पछिल्लो पटक उनै बादल अब घरको न घाटको हुन लागियो भनेर चिन्तित देखिएका छन् । पटकपटक प्रचण्डलाई धोका दिएका कारण फेरि कुन मुखले मलाई पनि राख, समेट भन्न जाने ? नजाउँ भने अब ओलीले बसीखप्न नदिने भए भन्ने निष्कर्षमा उनी पुगेका छन् ।
उनले आजकल आफना सचिवालयका केही सहयोगीसँग ओलीसँग अब सकिँदैन भनेर गुनासो गर्न थालेका छन् । भाषणमा तेस्रो जनआन्दोलन शुरु भएको बताउने उनी अब प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालसँग कुरा मिलाएर पनि फर्कनु पो पर्छ कि भन्ने स्थानमा आइपुगेका छन् । उनको साथमा सल्लाहकारको पगरी गुथेर बसेका इन्द्रजीत राई मात्रै बाँकी छन् । उनले पनि कुन दिन साथ छाडेर हिँड्ने हुन् ? त्यसको कुनै ठेगान छैन ।
गृह मन्त्रालयमा डोरी उपनामका राईको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको जानकारहरुको भनाइ छ । सचिवालयमा रहेका भनिएकाहरु समेत पछिल्ला दिनमा कमाऊ धन्दामा लागेको बताउनेहरु पनि कम छैनन् । छोराको कार्यशैली पनि त्यस्तै छ । जसरी हुन्छ, गृह मन्त्रालयको नाम भजाएर पैसा कमाउने ध्याउन्नमा थापा पुत्र लागेका छन् ।
ओलीले गन्न छाडेपछि उनले पछिल्ला दिनमा पूर्व माओवादीको नाममा ओलीको गुटमा समावेश भएका टोपबहादुर रायमाझीसँग पनि गुनासो गरेका छन् । नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ भने जस्तै टोपबहादुर पनि नेकपाको मूल नेतृत्वविरुद्ध अवाञ्छित आरोप लगाएर पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका छन् । बादल पछिल्लो पटक ओलीले नगनेको भन्दै गुनासो लिएर टोपबहादुरलाई भेट्न गएका थिए । उनले पूर्वमाओवादीको स्वर एउटै हुनुपर्ने बताएका थिए ।
चौटाखान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्ने नेपाली उखानले भने जस्तै, ठूलो भाग खोज्दै गएका टोपबहादुर र रामबहादुरहरु अब छिट्टै ओलीको गुट परित्याग गर्ने उपायको खोजीमा रहेका छन् । तर, अवरसरवादीलाई नेकपाको मूल पार्टीमा ठाँउ दिने वा नदिने भन्नेबारेमा नेकपाले भने केही बताएको छैन ।
कसले पाउला नेकपा नाम ? सर्वोच्च अदालतले आज फैसला गर्दै
कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग
पूनस्थापित संसदको अधिवेशन आजदेखि, कसको रणनीति के ?
वैधानिक नेकपा हामी नै हौँ : अध्यक्ष प्रचण्ड
विप्लव नेतृत्वका धर्मेन्द्र बास्तोलाले भने– मुख्य विषयमा जनमतसंग्रह
प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए खोप
मेलम्चीको ‘हेडवक्र्स’ निर्माण अन्तिम चरणमा
मकैको खोसेलाबाट घरायसी सामग्री
१६ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो चरणको खोप
सवारी साधनको ठक्करबाट चितुवाको बच्चा म–यो
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यसूची यस्ता छन्
राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरका लागि फेरी शुरु भयो चलखेल !
गृहमन्त्री बादल भेट्न पुल्चोक पुगे विप्लव
नेकपा संसदीय दलको नेता चुनिए प्रचण्ड, ओली पक्षका सांसदलाई आफ्नो समूहमा आउन प्रचण्डको आग्रह